सारा नेपालीलाई सम्पूर्ण विभेदबाट मुक्ति दिलाउन नयाँ दलः ( आङकाजी शेर्पा) | Nepali News नेपालीसमाचारडटकम	Stay Connected
DIASPORAEnglishEnglish ArticleEntertainmentEvents Photo GalleryGalleryHeadlinesHealthLiteratureMixOpinionPhoto GallerySportVideo GalleryWeekly in PDFअनौठो संसारचुटकिलामहत्वपूर्ण दस्तावेजरोचक जानकारीविज्ञान प्रविधि	Latest Comments in RSS
Follow us on Twitter	Connect on Facebook	/ म संघीय गणतन्त्रमा ...विश्वास गर्छु ।..
माल्भिका सुब्बा.....	नेपालीसमाचार.डटकम
यस पटक पहिचानवादी झनै बढेका छन् ।
- डा. महेन्द्र लावती	Home
Weekly in PDF
सारा नेपालीलाई सम्पूर्ण विभेदबाट मुक्ति दिलाउन नयाँ दलः ( आङकाजी शेर्पा)
अहिले आदिवासी जनजातिको नयाँ दल खोल्ने कुरा के हुँदैछ ?
हामी अहिले मुलुकमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडा र महिलाहरूको पक्षमा उनीहरूको पूर्ण अधिकारसहितको संविधान जारी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा छौं । एकातिर यो देशका ठूला दल भनाउँदाहरूको विकल्पको रुपमा निर्माण गर्न लागिएको शक्ति आदिवासी जनजाति, मधेसीहरूको दल खोल्ने भन्ने सवाल अस्ति असारमा भएको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनले पनि अनुभूत गराएको कुरा हो । त्यसका लागि ९ सदस्यीय कार्यदल तयार पारेको छ । त्यसले विभिन्न दल, समूह, राजनीतिक घटक, सङ्घसंस्थासँग छलफलमा व्यस्त रहेको छ । यसका साथै एमाले र काङ्ग्रेसभित्रका अग्रगामी सोच बोकेका साथीहरूसँग मिलेर एउटा नयाँ दल खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । अहिले विशेष गरेर नयाँ दल खोल्ने बारेको अवधारणामै छलफल र परामर्श जारी रहेकाले अगष्ट ९ (विश्व आदिवासी जनजाति दिवस) का दिन नै पार्टी घोषणा हुन भने नसक्ला । हुन त हामीले यही अगष्ट ९ का दिन नै गर्नुपर्ने हो । किनभने यो दिनले ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ । तर त्यसमा जति कसरत हुनुपर्ने हो त्यो नभएकाले हुन सकेको छैन । तर त्यो दिनमा पार्टी घोषणा नभए पनि कुनै आदिवासी जनजाति नेताले पार्टी परित्याग गरेको वा नयाँ दल खोल्छौँ है अब भन्ने कुराको घोषणा भने पक्कै त्यो दिनमा गर्नेछौँ ।
एकात्मक पार्टीबाट मुक्त हुनका लागि पहिचानवादीहरू नयाँ दलको निर्माणमा लागेको देखिए तापनि उनीहरूमा एकढिक्का हुने सम्भावना कम देखिन्छ नि ?
जब यो देशका मुलधारका राजनीतिक दलबाट कुनै समाधान नआउने भएपछि त्यसको विकल्पमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता महसुस गरियो । तर अहिले आएर केही एकात्मकवादी, संघीय विरोधीहरू आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडालाई खण्डित पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्रका तानाबाना सुरु भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ । त्यसकारण, ती प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले हामीबीचको एकतालाई खल्बल्याउनका लागि विभिन्न सभा, समारोहमा, विभिन्न बैठकहरूमा निराधार, कपोलकल्पित भ्रमहरू, षड्यन्त्रहरू छरिरहेका छन् । अहिले हामीले निर्माण गर्न लागेको दल भनेको आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमहरूको साझा शक्तिको रुपमा रहनेछ । हामी एकढिक्का नहुने भन्ने कुरा निराधार र एकात्मकवादी, पहिचानसहितको संघीयताको विरोधीहरूको षड्यन्त्र मात्र हो । हामी जसरी भएपनि अहिले एमालेका विद्रोही वा अग्रगामी सोच बोकेका नेता, कार्यकर्ताहरू, काङ्ग्रेसका त्यस्तै साथीहरू, माओवादीका साथीहरू, विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय पार्टीहरू, मधेसी दलका साथीहरूको एकताबाट यो दल निर्माण गर्ने तयारी भएको छ । वास्तवमा, नेपालमा अहिलेसम्म जतिसुकै वर्गीयताको कुरा गरे पनि, जतिसुकै ठूलो जातीयताको कुरा उठाए पनि २४० वर्षदेखि त्यही एकात्मक हिन्दू खस ब्राह्मणवादी चिन्तनले जरा गाडेकाले र माओवादीले १० वर्ष बन्दुक बोके पनि संविधानसभाबाट उसले उठाएका मुद्दाहरू पूरा गर्न नसकेकाले नेपालका सम्पूर्ण ठूला र पुराना दलबाट नेपाली जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ । तसर्थ, नेपाली जनताले यिनीहरूको विकल्पको रुपमा नयाँ शक्तिको चाहनाभित्रै मनदेखि नै गरेकाले हामी त्यसमा तन, मनले लागेका छौं । अब धेरै होइन दुई–तीन महिनाभित्रै नेपाली जनताले त्यस शक्तिलाई साथमा पाउनेछन् । यसले मात्र सारा नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण विभेदबाट मुक्ति दिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको बाटोमा हिडाउँनेछ ।
अहिले आएर महासंघ र उसका केही बौद्धिक व्यक्तित्वहरू मात्र एउटा कोठामा राखेर कुरा गर्ने तर सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, तथा जातीय क्षेत्रीय साना दलहरूसँग कुरा नचलाउने भन्ने आरोप छ ?
यसमा केही कुरामाथि प्रष्ट हुनु जरुरी छ कि महासंघ आफैमा दलीय रुपमा निरपेक्ष छ र महासंघ आफैमा पार्टी घोषणा गर्ने स्थितिमा रहेको छैन । महासंघ भनेको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि आन्दोलनकारी जनताहरू उत्पादन गर्ने एउटा विश्वविद्यालय हो । यसका साथै हामीलाई राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनको महसुस ग¥यौँ र त्यो ५६ वटा जातीय संस्थाहरू, सबै जिल्लाका समितिहरू, गैरआदिवासीहरू, महिला, उत्पीडितहरू, दलितहरूको समेत उपस्थिति, सल्लाह र परामर्शमा सम्पन्न पनि ग¥यौँ । सम्भवतः त्यो परामर्श, छलफल र उपस्थिति नै वास्तवमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो । यद्यपि, महासंघले निरङ्कुशता गरेको भए त्यो सम्मेलनको कुनै औचित्य पनि रहँदैन र स्वीकार्य पनि हुन्न । यस्तो कार्य गर्नु आदिवासी जनजातिहरूको लागि विश्वासघात पनि हो । तर, अब बन्ने दल भनेको त्यो हिजोको जस्तो ५, ६ जना संस्थापकहरूले हस्ताक्षर गरेर बन्ने पार्टी नभइकन कम्तीमा एकहजार जना संस्थापक सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर स्थापना भएको ऐतिहासिक दल पनि यही दल हुनेछ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त रहेकाछौँ ।
यी सम्पूर्ण कार्यहरू गरीरहँदा ढिलो हुन्न र ?
अब यो ढिलो र चाँडो भन्ने कुराचाहिँ संविधानसभाको निर्वाचनले तय गर्ने कुरा हो । अब त्यो चुनाव भनेको मङ्सिर त के यो सालभरिमा पनि हुने अवस्था छैन । तर त्यसरी लामो समयसम्म ढिलो गर्ने स्थिति पनि हामीसँग छैन । बढी ढिलो भनेको असोज कात्तिकभित्र निश्चित नयाँ शक्तिको रुपमा दल निर्माण हुन्छ ।
अब बन्ने दलको सबैलाई समेटेर लैजाने खालको वैचारिक धरातल के हुनसक्छ ?
यसमा मलाई के लाग्छ भने आजसम्म नेपालमा जुनसुकै वैचारिक दर्शनले पनि विचार र व्यवहारमा तालमेल हुन नसक्दा सारा नेपाली जनतामा वितृष्णा पैदा भएको हो । त्यसको लागि हरेक दर्शनको जीवन मुक्तिसँग अन्तरसम्बन्ध रहनुपर्छ । यो भनेको हाम्रो सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडा सबैको अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? सबैलाई कसरी मिलाएर लान सकिन्छ ? जस्तैः एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भन्ने विचारको एउटा राउटेसँगको जीवनसँग राम्ररी तालमेल र अन्तरसम्बन्ध रहन गयो भने त्यस विचारको महत्व र जीवन्तता रहनसक्छ । तर त्यो विचारले कुनै पनि समुदायसँग अन्तरसम्बन्ध नै देखाउँदैन भने त्यस्तो कोरा दर्शन र विचारको के अर्थ रहन्छ र ? त्यसरी नै माओवादीको जनयुद्ध पनि २०५८ सालसम्म वर्गीययुद्ध मात्र गरिरहेका बेला कहाँ त्यत्रो आकार ग्रहण गरेको थियो र ? जब उसले जातीय मुद्दालाई अगाडि ल्यायो तब माओवादीको जनयुद्धले तीव्र गति लिएर दुईगुना, चौगुना बढेर शिखर चुम्न सफल भयो । तसर्थ अब बन्ने हाम्रो दलको मुख्य वैचारिक पक्ष भनेको अहिलेको हाम्रो मुख्य मुद्दा भनेको संघीयता भएकाले संघीय शब्दलाई नछोडीकन समाजवाद नै हुनेछ । यो भनेको खाटी एमालेजस्तो पनि हुँदैन, माओवादीको अवतारजस्तो पनि हुँदैन र राप्रपा र काङ्ग्रेसको जस्तो प्रजातन्त्रको नाममा अधिनायकवाद लाद्ने खालको पनि हुँदैन । समग्रमा त्यो सामाजिक न्यायप्रणाली, संघीयता र पहिचानमा आधारित पार्टी हुनेछ । यसमा अझ छलफल र परामर्श जारी नै रहेको छ ।
त्यसरी सबै कुरा मिसाउँदा त खिचडी हुन्न र ?
होइन, आजसम्म यो मुलुकमा त्यस्तो खालको वैचारिक धरातलको जन्म नभएर नै सारा नेपाली जनतामा वितृष्णा पैदा भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा कहाँ वर्गीय विचार मात्र ठीक हुन्छ र ? त्यसरी नै कहाँ काङ्ग्रेसले लिएको विचार मात्र ठीक भएको छ र ? तसर्थ, हाम्रो सन्दर्भमा जुन ढङ्गले अहिले हामीले ल्याउन खोजेको अवधारणा हो । त्यो नै उत्तम वैचारिक धरातल हो भन्ने हामीलाई लागेको छ । वास्तवमा, यही विचारले मात्र आजसम्म विभिन्न विभेदमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला तथा पिछडिएका क्षेत्रका जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।
अब बन्ने दलको संरचना कस्तो हुन्छ ?
यो दलको संरचना भनेको मूल रुपमा सामूहिक नेतृत्वको चयन हुनेछ । कुनै नेताको अधिनायकत्व लाद्ने खालको पार्टी हुने छैन । त्यसरी नै कुनै पनि व्यक्ति एमाले काङ्ग्रेसको जस्तो नमरुन्जेलसम्म त्यस दलको अध्यक्ष रहिरहने भन्ने बाहुनवादी चरित्रको यो दल घोर विरोध गर्दछ । अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति अध्यक्ष पदमा बढीमा २ कार्यकालभन्दा बढी रहन सक्दैन । कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा अध्यक्ष र महासचिवले मात्र गर्न पाउने छैन । त्यसमा महाधिवेशनले पारित गरेका कुराहरूका साथै अन्यको पनि निर्णयलाई आवश्यक ठानिनेछ । त्यसरी नै यो दल सामूहिक नेतृत्व र निर्णयमा अति नै विश्वास गर्ने पार्टी हुनेछ ।
नयाँ दलको समितिमा प्रस्तावित स्वायत्त राज्य समितिहरू कि जिल्ला समितिहरू रहन्छन् ?
यसमा धेरैको कुरा के आएको छ भने जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरूको आधारमा नै विभिन्न समितिहरू निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । हामी पहिचानवादी भएकाले त्यो महेन्द्रकालीन १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा समिति नबनाउने भन्ने रहेको छ ।
यस अवस्थामा आङकाजी शेर्पा नयाँ दलको नेता कि आदिवासी जनजाति महासंघको नेता हुनेछ ?
अहिले महासंघमा मेरो अझै १ वर्षको कार्यकाल रहेको हुँदा तत्काललाई म आदिवासी जनजातिकै हकअधिकारको लागि लडिरहनेछु । यसो भन्दैमा म अब बन्ने नयाँ दलमा नरहने भन्ने पनि होइन ।
तपाईंलाई टिब्बेटियनसँग मिलेर चीनविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ नि ?
अब हाम्रो मुलुकमा के रहेको छ भने जातीय पहिचानको कुरा ग¥यो भने, आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दियो भने देश टुक्रिन्छ भन्ने कुरा हिन्दू उच्च खस ब्राम्हणवादीहरूको षड्यन्त्र हो । ती एकात्मकवादी खसब्राह्मणवादी नेताहरू भारत र चीनमा उपचारको क्रममा गएर आउँदा अर्थको कुनै अनर्थ नलाग्ने ? अनि, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमहरूले चाहिँ भारत र चीनका राजदूतहरूलाई काठमाडौँमै भेट्यो भने भारतीय, चीनियाँ दलाल हुने यो कस्तो खालको सोच हो । यो सब तिनै उच्च हिन्दू खसब्राह्मणवादी एकात्मकवादीको षड्यन्त्र हो । त्यसरी नै नेपालका यिनै नेताहरू भारतमा गएर हाम्रो आन्दोलनको बारेमा नेपालको आदिवासी आन्दोलनको साँठगाँठ भारतीय पृथकतावादीसँग भएकाले उनीहरूको आन्दोलन सफल भएमा भारतलाई थप समस्या पर्ने भएकाले यिनीहरूलाई सहयोग गर्नु हुन्न है भन्दा रहेछन् । त्यसरी नै चीनमा गएर हाम्रै बारेमा भन्दा रहेछन् कि यी आदिवासी जनजातिहरू भनेका दलाइ लामाका सहयोगी भएकाले यिनीहरूको आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्नुहुन्न भन्दा रहेछन् । तर, म यही साप्ताहिकमार्फत् के भन्न चाहन्छु भने नेपालका आदिवासीहरू जहिल्यै पनि एक चीनको पक्षमा रहेका छन् । तिब्बत चीनको स्वशासित प्रदेश हो । दलाइ लामालाई हामीले मात्र धार्मिक आस्थाका रुपमा लिएका छौँ । दलाइ लामाको राजनीतिक अभिष्टलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ । तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि गरिनु हुन्न र भुटानी शरणार्थीहरूले पनि नेपालको भूभाग प्रयोग गरी भुटान विरुद्ध गतिविधि गरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा यहाँका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
अहिले तपाईंहरूले बनाउन लाग्नुभएको दल अरु तीन दल बराबर एक दलको शक्तिमा आउने गरी तयार पार्ने भन्नुभा’ छ, त्यसको वास्तविक पृष्ठभूमि के रहेको छ ?
यसो भन्नुको अर्थ ‘३’ वटा शक्ति भनेका एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी भनिएको हो र ‘१’ भनेको हाम्रो बन्न लागेका दल भनिएको हो । हो तीनैवटा दल जतिको शक्तिशाली भनेको हाम्रो दललाई बनाउनु पर्छ भनिएको हो । अब यसको टेक्ने जग वा वास्तविक पृष्ठभूमि भनेको आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, पछाडि पारिएका क्षेत्र र ब्राम्हणक्षेत्री मित्रहरू नै यो शक्तिको निर्माण हुन लागेको हो । अब बन्ने त्यो शक्ति न त जातीयतामा आधारित हुन्छ, न त क्षेत्रीयतामा आधारित हुन्छ । तसर्थ, यो दलले विगतमा यी तीन दलले सम्बोधन गर्न नसकेका जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिङ्गीयजस्ता विभेद्लाई सम्बोधन गर्ने खालको शक्ति अब निर्माण हुन्छ ।
यो नयाँ दल बनाउने सवालमा २, ३ महिनामात्र ढिलो भयो भने विभिन्न षड्यन्त्रहरू भएर यो पार्टी पनि बन्दैन, मोर्चा पनि बन्दैन भन्ने कुरा आएको छ नि ?
यसमा हाम्रो लागि दुबै कुरा प्रत्युत्पादक छ । हामीले साह्रै ढिलो पनि गर्नुहुन्न र हतारमा आजको भोलि नै दलको घोषणा गर्नु पनि राम्रो हुन्न । षड्यन्त्रहरू विभिन्न हुन्छन् । तर हामी कति पनि विचलित नभई आफ्नो विचार र मुद्दालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिमा सजिलै पुग्छौँ । मैले के भनेको छु भने यो ६ महिनाभित्र जसरी भए पनि पार्टी घोषणा गरिनुपर्दछ । यसमा विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हामी सबैको साझा विचार हो । सम्भवतः मुलुक कृषिप्रधान भएकाले यो वर्षायामपछि असोज–कात्तिकतिर हामी यसको घोषणा गर्दछौँ ।
दल खोल्ने सिलसिलामा तपाईंहरू ढिलो गरिरहनु भएको अवस्थामा तपाईंहरूभन्दा अगाडि कसैले दल घोषणा गरी दिएमा तपाईंहरूको स्थिति के होला ?
अब नेपाली जनता गोरेबहादुर खपाङ्गी जस्ताको पार्टीमा कुनै हालतमा बस्नेवाला छैनन् । कुनै पनि जनताले कुनै पनि दलमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि त्यो दलको विधान, पार्टी संरचना, मुद्दा, विचार नपढी नहेरी कोही पनि पार्टीको सदस्य बन्नेवाला छैन । यदि कसैले यसो गरिहाल्यो भने त्यो पक्कै पनि प्रतिगामी विदेशी शक्ति तथा पहिचानविरोधीहरूको षड्यन्त्र भनेर बुझ्नु जरुरी छ । तिनीहरूलाई नाङ्गोझार पार्न जनतालाई सिकाइ रहनु पर्दैन । त्यस्तै यहाँ जनजातिले पार्टी खोल्यो भने मेरो अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने एमाले काङ्ग्रेसहरू अनि जातीय कुरा उठायो भने माओवादीका जातीय मोर्चाहरू कमजोर हुन्छ भनेर कुराले केही न केही षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेका छन् । त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हतारमा एकाध दुई व्यक्तिले हतारमा खोलेका पार्टीमा कोही पनि जनता समाहित हुनेवाला छैनन् । तसर्थ, हामी त एकदम ढुक्क छौँ कि हाम्रो एउटा नयाँ शक्तिको उदय हामी यो २, ३ महिनाभित्र गर्नेछौँ ।
(यो अन्तर्वार्ता नेपाली समाचार साप्ताहिकका लागि सम्पादक विश्वादीप लिम्बू, डीबी आङ्बुङ र सहयोगी पदम माबोद्वारा लिइएको हो । आङ्काजी शेर्पा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महासचिव हुनुहुन्छ । –स.) Related Postsतुहिएको आस र एमाओवादीको हार (प्रा. महेन्द्र लावती)
एमाओवादीको पराजय र संविधान सभा निर्वाचन २०७० को सन्देश
गोरे बहादुर खपांगी र दशैँ बहिस्कार (हुम सुनारी मगर)
नेपाल को सत्य ईतिहास (हन्सजर्ज वर/जर्मनी)
जर्बरजस्त लादिएको दशैं जनजाति समुदायले विर्षि सके (सुहिम याक्थुङ)
अन्तरवार्ता- ‘मेरो जित निश्चित छ’ – चर्चित नेता स्थापित
आदिबासी जनजाति र आदिबासी जनजाति महिलाको भूमिका (भावना परिष्कृत सुनुवार)
लिम्बुवानी आन्दोलन र हिन्दू चाड दसैं (डी.बी. आङ्बुङ)
जातीय समानताको लागि हिङ्सात्मक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने ? (विजय सुब्बा)
सिंगापुरबाट अपटुडेट पूर्व मन्त्री गोरे बहादुर खपांगीज्यूको स्वास्थ्यमा द्रुत गतिले सुधार (आले माइला)
गैर–आवासीय नेपाली संघ बेलायत र यसले जन्माएको विकृति (अधिवक्ता चण्डीराज राई)
संविधानसभाको विश्वव्यापी अनुभवमा नेपालको सन्दर्भ (रमेश लम्साल)
लोकसागर साम्बा र संघीय समाजवादी (छविसुब्बा सङ्बाङ्फे लिम्बू)
जनजाति मुलका कवी श्रवण मुकारुङद्धारा दास स्वीकार पछिका भ्रमहरु (विश्वासहाँङ खेवाहाङ)
यसर्थ आदरर्णिय खपागी ज्यूको उपचारको लागि सहयोग गरौ (हुम सुनारीमगर)
“एमाले नेताहरु क्षेत्री समुदायका मान्छेहरुलाई समेत ब्राह्मण सरह योग्य मान्दैनन्” (बिजय सुब्बा)
एमाओवादीसँग न पैसा, न एकता (अजम्बर राई काङमाङ)
एनआरएन एशिया प्यासेफिक मनिला सम्मेलनका सन्देशहरु (विश्वास दीप तिगेला)
अस्मितावादी राजनीति (गोपाल ठाकुर)
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा एमाले हावी माओवादी शून्य, कांग्रेसको कमजोर उपस्थिति
नेपाल निर्माणको जिम्मेवारी तथा अवसरमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी (विश्वासहाँङ खेवाहाङ)
मृत्युसंग जुध्दै खपाङ्गी, किन बांच्नुपर्छ खपाङ्गी ? (जेवी पुन मगर)
अनिज अब महासंघ (गणेश राई)
कसरी हुन्छ निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण ?
४ दलको सहमति सिमान्तकृतहरुलाई अनागरिक बनाउने सहमति हो (विश्वास दीप तिगेला)
एचआइभी सङ्क्रमितप्रति स्थानीय निकायको बेवास्ता
बाल विवाह गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ
झुलाघाटमा भारतीय पक्षद्वारा तटबन्ध निर्माण गरिँदै
विद्यालयमा बुहारी विद्यार्थी झन धेरै
श्रेयासीलाई हार्दिक बधाई
विन्दवासिनी म्युजिक अवार्ड प्रदान
ल्हामु तामाङलाई ४ करोड ७ लाख धरौटी माग
पोखरा अर्मलामा जमिन भासिएको बारे अध्ययन समिति गठन
जनमुक्ति पार्टीद्वारा समानुपातिक सभासद् सिफारिस
B B C नेपाली सेवा (Live)
अनलाइन नेपाली साहित्य मंच
नेपाल शेयर मार्केट
प्रवासी नेपाली साहित्य समाज
December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 April 2011 March 2011 February 2011 Search by Category
Photo Gallery (250)
Events Photo Gallery (22)
Weekly in PDF (9)
अनौठो संसार (15)
महत्वपूर्ण दस्तावेज (56)
विज्ञान प्रविधि (12)
अल विदा मण्डेला
अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाइयोस
फोटो आफै बोल्छ
© Everest Real Media Pvt. Ltd Send us news at: nepaliSamachar@email.com
Users on page Now online: 20Today: 1998This week: 2744Overall: 549068